Pirates, Straw Hat Pirates, Martial Artists,
and ၁၅ more
Monkey D. Luffy (モンキー･D･ルフィ Monkī D. Rufi?) (သို့) Straw Hat Luffy (麦わらのルフィ, Mugiwara no Rufi?), သည် ဂျပန်manga ကာတွန်းရေးဆရာ Eiichiro Oda ရေးဆွဲသော One Piece အမည်ရှိ manga ကာတွန်း၏ အဓိက ဇာတ်ဆောင် ပင်လယ်ဓားပြတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ Revolutionary Army's commander; Dragon ရဲ့သား ဖြစ်သော Luffy သည် Marine မှ နာမည်ကျော် Vice Admiral Garp ရဲ့ မြေးဖြစ်သလို Fire Fist Portgas D. Ace နှင့်လည်း သွေးသောက်ညီအစ်ကိုတော်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Pirate King(ပင်လယ်ဓားပြ ဘုရင်) Gold D. Roger ထားခဲ့တဲ့ One Piece ဆိုသော ရတနာသိုက် ကို ရှာဖွေဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ Straw Hat Pirates အမည်ရှိ ပင်လယ်ဓါးပြအဖွဲ့ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ Luffy ဟာ Straw Hat Pirates အဖွဲ့ရဲ့ Captain လည်းဖြစ်သလို သူတို့အဖွဲ့ရဲ့
ထိပ်ဆုံး fighter သုံးယောက်ထဲက တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Red Line အထိ ဆိုက်ရောက်ပြီးဖြစ်ကြသော The Eleven Supernovas လို့တင်စားခေါ်ခံကြရတဲ့ တက်သစ်စ နာမည်ကျော် ပင်လယ်ဓားပြ ဆယ်တစ်ယောက်ထဲမှာ Luffy လည်းပါ၀င်ပါတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ Marine မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားတဲ့ ဆုကြေးငွေ
100,000,000 အထက်ကျော်သူတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်။ အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ Luffy ရဲ့ဆုကြေးငွေ တန်ဖိုးဟာ
400,000,000 ကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။ Luffy ဟာ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ကမ္ဘာအနှံ့တင်မကပဲ Yonkou, the Shichibukai နှင့် Marines အထိ လူသိများသူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ World Government နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကာ ရာဇဝတ်မှုတွေ အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ထင်ရှားတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေကတော့ East Blue တွင် နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားခဲ့သော ပင်လယ်ဓားပြခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် Arlong ကို အနိုင်ရပြီးနောက်ပိုင်းတွင် Marine အနေဖြင့် စတင်သတိပြုမိလာပြီး ရှေဦးစွာ bounty အနေဖြင့် 30 millions Billi သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် Alabasta တွင် Shichibukai အဖွဲ့၀င်တစ်ဦးဖြစ်သော Crocodile ကိုအောင်မြင်ပြီးနောက် Bounty 100 Million Billi အထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ ထိုဖြစ်ခဲ့သော ရာဇဝတ်မှုတွေများထဲတွင် သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင် Robin အား Enies Lobby တွင် World Government ကိုဆန့်ကျင်၍ ကယ်ခဲ့သော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကြောင့် 300 Million Billi အထိသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ Marine ၏ Impel Down ထောင်အား ၀င်ရောက်ပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ် ကြောင့် အပြင် Celestial Dragon တို့အား ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြုမူလျှင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကြောင်းအရာတို့ကိုသိသော်လည်း Tenryuubito အား လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်တို့ကြောင့် တစ်ချို့သူများက သူ့အား မိုက်မိုက်မဲမဲ နှင့် ထင်ရာပြုလုပ်တတ်သူဟု တင်စားကြပြီး World Government ကလည်း သူ့ရဲ့အဖေ Dragon မျိုးရိုးကြောင့် "dangerous future element" လို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအပြင် ထို့သို့ World Government Romance များဖြစ်သည့် Tenryuubito တို့ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုကြောင့် Marine ထိပ်သီးသုံးယောက်ထဲမှ Admiral Kizaru ကိုယ်တိုင် လာရောက်နှိမ်နှင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပါသည်။
Straw Hat ကို အမြဲဆောင်းထားတတ်တာက သူရဲ့ အသွင်လို့ဆိုရပါမယ်။ အဲဒီ ကောက်ရိုး ဦးထုပ်ကတော့ Red-Haired Shanks က ငယ်စဉ်တုန်းက ပေးထားခဲ့တဲ့ ဦးထုတ်ပါ။ မျက်လုံးအောက်မှာ ချုပ်ရာ ၂ ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ချုပ်ရာ ၂ ချက်ကလည်း Chapter 1 စကတည်းက ပါလာတာပါ။ ဆံပင်အနက်ရောင် ခပ်တိုတို ပုံစံနဲ့ပါ။ သူ့ပုံစံ ပိန်ပိန်ပါးပါး ပုံစံရှိပေမယ့်လည်း သူ့ shirt အင်္ကျီအောက်က ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကတော့ အံဩဖို့ကောင်းလောက်အောင် ဗလ တောင့်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Marine Ford တိုက်ပွဲတွင် Akainu ၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Luffy ရဲ့ ရင်ဘတ်တွင် ကြတ်ခြေခတ် ဒဏ်ရာကြီး ဖြစ်ခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အမာရွတ်အဖြစ်သို့အသွင်းပြောင်းလဲသွားပါသည်။
Luffy ဟာ အများအားဖြင့် အဝတ်အစားတစ်မျိုးတည်း ဝတ်ထားတတ်သော်လည်း ကျွန်းတွေပေါ်မှာ အဝတ်အစား အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားပါတယ်။ ကျွန်းပေါ်က စွန့်စားခန်းတွေပြီးသွားရင်တော့ နဂိုမူရင်း အဝတ်အစားကိုသာပြန်ပြောင်းဝတ်တတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သူဟာ အနီရောင် စွပ်ကျယ်နဲ့ဘောင်းဘီ အပြာကို ပုံမှန် ဝတ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အဲဒီပုံစံအတိုင်းပေမယ့် အရောင်မျိုးစုံလည်းပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။
Enies Lobby မှာတော့ သူဟာ အမဲရောင်ဘောင်းဘီ ဝတ်ထားပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အိပ်ကပ်ပါပြီး အသားတွေကို သယ်သွားဖို့အတွက်ပါ။Thriller Bark မှာတော့ လိမ္မော်ရောင် စွပ်ကျယ်နဲ့ အနီရောင် ဘောင်းဘီ အတိုကို ဝတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ Sabaody Archipelago မှာတော့ အပြာရောင် စွပ်ကျယ်နဲ့ အပြာနက်ရောင် ဘောင်းဘီကို ဝတ်ခဲ့ပါတယ်။Impel Down မှာတော့ အပြာနုအောင် စွပ်ကျယ်လေးနဲ့ အနီရောင်ဘောင်းဘီတိုနဲ့ တွေ့ရပါတယ်။ Magellan နဲ့ တိုက်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ Inazuma က Luffy ကို အဝါရောင် အင်္ကျီလဲပေးခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ ဆုကြေး ထုတ်ထားပုံ
ပထမဆုံး စတင်သော Luffy ပုံ
One Piece: Unlimited Adventure က Luffy
One Piece: Unlimited Cruise က Luffy
Afro Luffy ကတော့ Davy Back Fight အခန်းမှာ Foxy နဲ့ ချတဲ့ Captain's Fight ကပုံ
One Piece Film: Strong World က Luffy
Marineford တိုက်ပွဲမှ Luffy
Luffy with the message to his crew on his right arm, 3D2Y.
ပြင်ပ စပ်ဆက်မှုများ Edit
Monkey D. Luffy at Absolute Anime
"http://my.onepiece.wikia.com/wiki/Monkey_D._Luffy?oldid=167" မှ ရယူရန်